ဆာရှိမိ (ငါးအသားလွှာ)ကို လတ်၊မလတ် ခွဲခြားနိုင်မယ့် အချက် (၄) ချက် - For her Myanmar
စားမယ့်စားတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးတွေ ရွေးစားလို့ ရအောင်ပေါ့..
ဆာရှိမိ ဆိုတာက ပင်လယ်စာအစိမ်းကိုမှ တစ်ကိုက်စာအရွယ်လေးတွေ ဖြတ်ထားပြီး ပဲငံပြာရည်နဲ့ တွဲဖက်စားသုံးတဲ့ ဂျပန်အစားအသောက်တစ်မျိုးပါ။ ဆူရှီပေါ်က ပင်လယ်စာ အစိမ်းတွေ ဟုတ်ဘူးနော်… ပင်လယ်စာရဲ့ မူရင်းအရသာကို သဘာဝအတိုင်း ခံစားနိုင်အောင်လို့ အစိမ်းသက်သက်ကိုမှ Soy Sauce (ပဲငံပြာရည်) နဲ့ ဝါဆာဘိတို့နဲ့ အတူတူတွဲစားရတာမျိုးပါ။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ငါးကို ပါးပါးလွှာတော့မှသာ အရသာကောင်းတဲ့ ဆာရှိမိ ရတာလေး တစ်ကွက်တော့ ရှိတာပေါ့…
ကိုယ်တွေ နိုင်ငံမှာ ဂျပန်ဆိုင်တွေ များပြီး ဆူရှီကိုလည်း ကြိုက်တဲ့သူတွေ ပေါပေမဲ့ ဆာရှိမိကျတော့ သိပ်ကီးမကိုက်ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆာရှိမိဆိုတာက ပင်လယ်စာ အစိမ်းဆိုတော့ ပါးစပ်ထဲထည့်ဖို့ သိပ်မဝံ့ရဲတာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြတယ်လေ… ဒါပေမဲ့ ကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်း ကြိုက်နေကြဆဲပါပဲနော်.. တူနာ၊ ဆယ်လ်မွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ငါးပါးနီ၊ မက်ကရယ်၊ ပင်လယ်ကကတစ် စသဖြင့် ဆာရှိမိ အမျိုးမျိုး ရှိပြီး ဆယ်လ်မွန်ကိုတော့ လူကြိုက်များပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘယ် ဆာရှိမိမဆို လတ်ဆတ်နေမှ အရသာ ရှိပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှာပေါ့.. ဟုတ်? ဒါဆို ဆာရှိမိကို လတ်မလတ် ဘယ်လို ခွဲကြမလဲ?
Related Article >>> ဂျပန်တွေပြောတဲ့ ဆူရှီစားနည်း အစစ်အမှန်
၁။ အနံ့ကို ဂရုပြုပါ။
ဆာရှိမိကနေ ပင်လယ်နံ့ ရလား တစ်ချက်သတိထားကြည့်ပါ။ တချို့ကလည်း အနံ့ မရှိဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဆာရှိမိကို တူနဲ့ယူပြီး ပါးစပ်နား တေ့ကြည့်တဲ့အခါ ငါးနံ့ ဒါမှမဟုတ် အငန်နံ့ ရနေတယ်ဆိုရင် ဒါက ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ဆာရှိမိ ပန်းကန်ရှေ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတုန်း အနံ့က နှာခေါင်းဝဆီ အလိုလိုတက်လာရင်တော့ ဒါဟာ မလတ်ဆတ်ဘူးဆိုတဲ့ သက်သေပါပဲ။
၂။ လတ်၊မလတ်ကို ရုပ်ထွက်နဲ့ ခွဲကြည့်ပါ။
ဆာရှိမိကို သေချာစိုက်ကြည့်တဲ့အခါ ငါးရဲ့ အကြောလေးတွေကို အသေးစိပ်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင် လတ်ဆတ်မှုကို တိုင်းတာလို့ ရပါတယ်။
Related Article >>> ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ မသိမဖြစ် သိထားရမယ့် ဂျပန်​ထမင်းစားဝိုင်းက ယဉ်​​ကျေးမှုများ
၃။ အရောင်ကို ကြည့်ပါ။
လတ်ဆတ်တဲ့ ငါးကို ဆာရှိမိ လုပ်တဲ့အခါ အကြည်ရောင် တောက်နေတတ်ပါတယ်။ နို့နှစ်ရောင် အချွဲတွေ ပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီငါးဟာ မလတ်လို့ပါပဲ။ နောက်ပြီး ဆယ်လ်မွန်ငါးမှာဆို မွေးမြူရေးနဲ့ သဘာဝ ဆယ်လ်မွန်တွေကြားမှာ အရောင်ကွာပါသေးတယ်။ သဘာဝ ဆယ်လ်မွန်ငါးက အနီကြော ပိုများပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီး ကောင်းမွန်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ.. တခြားငါးတွေအတွက်ကတော့ အရောင်က မမှိုင်းနေသရွေ့ လတ်ဆတ်တယ်လို့ ဆိုလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
၄။ ပုံစံ ပျက်၊ မပျက် ကြည့်ပါ။
ဆာရှိမိကို စားတော့မယ်ဆိုရင် ငါးအသားကို အရင်ဆုံး လက်နဲ့ ထိုးကြည့်ပါ။ ပုံမှန် အနေအထားအတိုင်း ပုံမပျက် ပြန်ရတယ်ဆိုရင် လတ်ဆတ်တယ် ပြောလို့ ရပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ဆာရှိမိကို တူနဲ့ ကိုင်တဲ့အခါ အဆင်ပြေပြေ ကိုင်လို့ရပြီး ပဲ့သွားတာမျိုး မရှိပါဘူး။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေအပြင် ဆာရှိမိမှာ နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက် ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ စားဖိုမှူးက ငါးကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ကိုင်တွယ်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ဆာရှိမိရဲ့ အရည်အသွေးက ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
References : matcha,world of buzz
စားမယျ့စားတော့ လတျလတျဆတျဆတျလေးတှေ ရှေးစားလို့ ရအောငျပေါ့..
ဆာရှိမိ ဆိုတာက ပငျလယျစာအစိမျးကိုမှ တဈကိုကျစာအရှယျလေးတှေ ဖွတျထားပွီး ပဲငံပွာရညျနဲ့ တှဲဖကျစားသုံးတဲ့ ဂပြနျအစားအသောကျတဈမြိုးပါ။ ဆူရှီပျေါက ပငျလယျစာ အစိမျးတှေ ဟုတျဘူးနျော… ပငျလယျစာရဲ့ မူရငျးအရသာကို သဘာဝအတိုငျး ခံစားနိုငျအောငျလို့ အစိမျးသကျသကျကိုမှ Soy Sauce (ပဲငံပွာရညျ) နဲ့ ဝါဆာဘိတို့နဲ့ အတူတူတှဲစားရတာမြိုးပါ။ လတျလတျဆတျဆတျ ငါးကို ပါးပါးလှာတော့မှသာ အရသာကောငျးတဲ့ ဆာရှိမိ ရတာလေး တဈကှကျတော့ ရှိတာပေါ့…
ကိုယျတှေ နိုငျငံမှာ ဂပြနျဆိုငျတှေ မြားပွီး ဆူရှီကိုလညျး ကွိုကျတဲ့သူတှေ ပေါပမေဲ့ ဆာရှိမိကတြော့ သိပျကီးမကိုကျဘူးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆာရှိမိဆိုတာက ပငျလယျစာ အစိမျးဆိုတော့ ပါးစပျထဲထညျ့ဖို့ သိပျမဝံ့ရဲတာမြိုး ဖွဈတတျကွတယျလေ… ဒါပမေဲ့ ကွိုကျတဲ့သူတှကေလညျး ကွိုကျနကွေဆဲပါပဲနျော.. တူနာ၊ ဆယျလျမှနျ၊ ရဘေဝဲ၊ ငါးပါးနီ၊ မကျကရယျ၊ ပငျလယျကကတဈ စသဖွငျ့ ဆာရှိမိ အမြိုးမြိုး ရှိပွီး ဆယျလျမှနျကိုတော့ လူကွိုကျမြားပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဘယျ ဆာရှိမိမဆို လတျဆတျနမှေ အရသာ ရှိပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျမှာပေါ့.. ဟုတျ? ဒါဆို ဆာရှိမိကို လတျမလတျ ဘယျလို ခှဲကွမလဲ?
Related Article >>> ဂပြနျတှပွေောတဲ့ ဆူရှီစားနညျး အစဈအမှနျ
၁။ အနံ့ကို ဂရုပွုပါ။
ဆာရှိမိကနေ ပငျလယျနံ့ ရလား တဈခကျြသတိထားကွညျ့ပါ။ တခြို့ကလညျး အနံ့ မရှိဘူးလို့ ဆိုကွပါတယျ။ ဆာရှိမိကို တူနဲ့ယူပွီး ပါးစပျနား တကွေ့ညျ့တဲ့အခါ ငါးနံ့ ဒါမှမဟုတျ အငနျနံ့ ရနတေယျဆိုရငျ ဒါက ပုံမှနျပါပဲ။ ဒီလိုမှ မဟုတျဘဲ ဆာရှိမိ ပနျးကနျရှေ့ ငုတျတုတျထိုငျနတေုနျး အနံ့က နှာခေါငျးဝဆီ အလိုလိုတကျလာရငျတော့ ဒါဟာ မလတျဆတျဘူးဆိုတဲ့ သကျသပေါပဲ။
၂။ လတျ၊မလတျကို ရုပျထှကျနဲ့ ခှဲကွညျ့ပါ။
ဆာရှိမိကို သခြောစိုကျကွညျ့တဲ့အခါ ငါးရဲ့ အကွောလေးတှကေို အသေးစိပျပျေါနတေယျဆိုရငျ လတျဆတျမှုကို တိုငျးတာလို့ ရပါတယျ။
Related Article >>> ဂပြနျလူမြိုးတှနေဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါ မသိမဖွဈ သိထားရမယျ့ ဂပြနျထမငျးစားဝိုငျးက ယဉျကြေးမှုမြား
၃။ အရောငျကို ကွညျ့ပါ။
လတျဆတျတဲ့ ငါးကို ဆာရှိမိ လုပျတဲ့အခါ အကွညျရောငျ တောကျနတေတျပါတယျ။ နို့နှဈရောငျ အခြှဲတှေ ပါနတေယျဆိုရငျတော့ ဒီငါးဟာ မလတျလို့ပါပဲ။ နောကျပွီး ဆယျလျမှနျငါးမှာဆို မှေးမွူရေးနဲ့ သဘာဝ ဆယျလျမှနျတှကွေားမှာ အရောငျကှာပါသေးတယျ။ သဘာဝ ဆယျလျမှနျငါးက အနီကွော ပိုမြားပွီး ကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုပွီး ကောငျးမှနျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ.. တခွားငါးတှအေတှကျကတော့ အရောငျက မမှိုငျးနသေရှေ့ လတျဆတျတယျလို့ ဆိုလို့ ရနိုငျပါတယျ။
၄။ ပုံစံ ပကျြ၊ မပကျြ ကွညျ့ပါ။
ဆာရှိမိကို စားတော့မယျဆိုရငျ ငါးအသားကို အရငျဆုံး လကျနဲ့ ထိုးကွညျ့ပါ။ ပုံမှနျ အနအေထားအတိုငျး ပုံမပကျြ ပွနျရတယျဆိုရငျ လတျဆတျတယျ ပွောလို့ ရပါတယျ။ လတျဆတျတဲ့ ဆာရှိမိကို တူနဲ့ ကိုငျတဲ့အခါ အဆငျပွပွေေ ကိုငျလို့ရပွီး ပဲ့သှားတာမြိုး မရှိပါဘူး။
အပျေါမှာ ပွောခဲ့တဲ့ အခကျြတှအေပွငျ ဆာရှိမိမှာ နောကျထပျ အရေေးကွီးတဲ့ အခကျြတဈခကျြ ရှိပါသေးတယျ။ ဒါကတော့ စားဖိုမှူးက ငါးကို ဘယျလို ကိုငျတှယျတယျဆိုတာပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ကိုငျတှယျမှုအပျေါ မူတညျပွီး ဆာရှိမိရဲ့ အရညျအသှေးက ပွောငျးသှားနိုငျပါတယျ။
Tags: Eat, Food, know, Knowledge, sashimi, things